Àmụmà Box oghere igwe panda Pow na mmụọ nsọ site ịga nke ọma nkiri aha Kung Fu panda. Ọ bụ a cha cha dịghị ego bonus video oghere na awade iche iche ihe ịtụnanya na egwuregwu. O doro anya na, na egwuregwu atụmatụ Chinese aesthetics. Wezụga na anya na-adọrọ mmasị, ọ bụkwa nnọọ ihe dị mfe na-egwu kwa. The egwuregwu bụ nnọọ prediktebul nke na-eme ya nnọọ ekwesị maka beginners. The egwuregwu na-utịp na obere ma Ugboro Enwee Mmeri ofụri egwuregwu.
Banyere Developer nke panda Pow:
The founders nke Lightning Box Games na-onwem na n'elu 20 afọ nke ahụmahụ na-emebe egwu na a na-elekwasị anya ná mgbakọ na mwepụ. na 2004 ha wee na ha onwe ha studio na malitere kpọbata ohere mpere na-egwu ya edekọ ụlọ ọrụ. a cha cha dịghị ego bonus egwuregwu bụ ha ọhụrụ àjà.
a cha cha dịghị ego bonus egwuregwu nwere a red acha backdrop na nke ahụ jupụtara na ụlọ nsọ, na Orient themed ịchọ mma. The egwuregwu na mmepe na edebewo anya n'ezie mfe n'adịghị ka ndị ọzọ Orient themed egwuregwu dị online, nke na-eme ka ọ na ihe a pụrụ inweta enweta. The ndịna nwekwara n'ụzọ mgbalị na n'otu oge ahụ gbara ọkpụrụkpụ nke na-enye nnọọ obi ụtọ na Ịgba Cha Cha ahụmahụ. E nwere ise-esi anwụde na atọ e nyere ahịrị na 25 ofu paylines. Ị ga-ahụkwa onye na akpaaka play egwuregwu mode na-ahapụ gị ka otu nzọ ọzọ na ọzọ. The akara na-esi anwụde gụnyere azu ozuzu, lanterns, mma Fans, 3 gold tokens, a nwa panda na ụkpụrụ kaadị akara.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a cha cha dịghị ego bonus game, ndị dị ka ndị:
Anụ ọhịa na Gbasaanụ– Nke a na egwuregwu nwere a panda ihe na-eme dị ka ma anụ nakwa dị ka ikposa. The panda akara nọ n'ọnọdụ ndị ọzọ nile na akara na-esi anwụde. Ọ bụrụ na ị hụrụ ise n'ime ha n'out oge ị na-utịp na free spins. Ị na-eguzo a ohere iji merie ruo 20 free spins na a n'usoro.
Extra Wild Symbols– Mmezi ọhịa pandas nọgide na-apụta n'oge free spins gburugburu. Ha nwere ike iputa anyplace ewepu na ukwu 1 na-amụba gị na-emeri Ohere. Ị ga-enwe ike retrigger atụmatụ ruo oge ị na-enwe ike ịchọta zuru ezu panda chụsasịa.
panda Pow nwere ihe niile na-aga n'ihi na ọ, oké eserese, dị mfe iwu na ghara ichefu na-akpali ego nwa anụmanụ zoro ofụri egwuregwu. a cha cha dịghị ego bonus egwuregwu na-adịghị mgbagwoju anya mgbe nile nke na-eme ya mbido-enyi na enyi kwa.